Inyanga kwiCapricorn Man: Mazi ngcono - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Inyanga kwiCapricorn Man: Mazi ngcono
Inyanga kwiCapricorn Man: Mazi ngcono
Inyanga kwindoda yaseCapricorn inendlela ebonakalayo yokusombulula izinto zayo, kwaye oku kuthetha ukuba inomdla wokugqibelela, inemigangatho ephezulu ngokwenene.
Usebenzisa ubuchule kunye nokuzimisela ukuzisa ubomi nakwezona zinto zincinci zincinci kunye nombala ngendlela eqaqambileyo yezinto azenzileyo.
NgoJanuwari 20 ukuhambelana kweempawu zodiac
Inyanga kwindoda yaseCapricorn ngamafutshane:
Iimpawu: Imvakalelo kunye nokuzingisa
Izinto ezingalunganga: Isimo sengqondo kunye nokungakhathali
Umphefumlo womphefumlo: Umntu onokumnceda ajongane neemvakalelo zakhe
Isifundo sobomi: Ukumamela ngakumbi kwiminqweno yabo enzulu.
Amabhongo kunye nepragmatism yakhe imnceda ukuba agxile kwizinto ezibaluleke kakhulu kunye nokwakha uhlobo lokuphila kuphela angaphupha ngalo.
Isidima sakhe kufuneka sigqibelele
Ngenxa yokuba le ndoda ifuna ukuba nendlela yokuphila ecacileyo, isebenza kakhulu ukuze iphumelele ebomini bobungcali, kwaye iya kuba nononophelo olukhulu kunye negama layo kwaye yiyo loo nto iya kujonga ubudlelwane apho inokufezekisa khona.
Kuye, oku kuthetha ukuba kuya kufuneka afumane iqabane elidala okanye elincinci kunaye, ukuze afunde omnye komnye yonke into efuna ukufundwa.
Unomonde kwaye unobubele kwaye ngamanye amaxesha oku kunokuphambuka kukukruquka, ke ukuba uyazi ukuba ungumntu oxabisa izinto ezilula, kodwa okhangela ubudlelwane obuzinzileyo, bexesha elide, qiniseka ukuba ulungile kuwe.
Njengoko besenditshilo ngaphambili, unamabhongo kakhulu kwaye ngenxa yokuba ngamanye amaxesha angabonakala ngathi akabakhathaleli abantu abamngqongileyo, kodwa oku akuyonyani.
Unenkathalo, uzolile kwaye ulungile kwaye uyakukubonisa oku ethubeni, ukuba ungoyena mhlobo usenyongweni, kwaye uyabuxabisa ubuhlobo obunzulu kakhulu.
Kodwa ngenxa yokuba enotyekelo lokubetha iinjongo ezinkulu, unokujongeka njengomntu osebenza nzima kuba uya kunika nomphefumlo wakhe ukuze azalisekise amaphupha akhe.
Uya kubetha nayiphi na imiqobo phantsi, kwaye ukuba le miqobo yenziwe ngumntu, akasokuze amxolele okanye amlibale loo mntu. Uya kuqinisekisa nje ukuba uya kutshabalalisa yonke into esemendweni wendlela yakhe egqibeleleyo.
Ukuba ufuna ukuba nobudlelwane nendoda ezelwe neNyanga eCapricorn, kuya kufuneka wazi ukuba uliqabane elilungileyo, kuba uya kuhlala ekulungele xa ufuna.
Uya kuba ngowakho ngonaphakade, kwaye uya kungqina kubo bonke abantu abakungqongileyo ukuba unomfazi ogqibeleleyo.
Kuba ukhathalela kakhulu igama lakhe, ufuna ukuqiniseka ukuba uya kulikhathalela igama lakhe, kwaye oko kuthetha ukuba unoxanduva lokuba ngumgcini wendlu kunye nomama ogqibeleleyo kusapho lwakhe.
njani ukwahlukana nendoda yekapricorn
Ziphathe kakuhle nomama wakhe, kuba xa wayekhetha wena, wakwenza oko ngokubonakalisa umfanekiso kanina emntwini wakho.
Ukuba ujonge ubomi obuzele yimibhiyozo, kungcono umtsiwe kuba uyonwaba ngokuhlala ekhaya nosapho.
Uyakuthanda ukubonwa njengendoda ehloniphekileyo, kwaye uyakuthanda xa abanye bethembele ngaye, okanye umphathi wakhe ufuna uncedo lwakhe. Uyakonwabela ukusebenza kwiqumrhu elikhulu, apho anokuhlala ecelwa umngeni sisikhundla esingcono.
Ukuba ufuna umntu oza kukucebisa, kuya kufuneka ukhethe le Nyanga eCapricorn kuba uwenza ngendlela egqibeleleyo umsebenzi wakhe.
Unesakhono sokukhathalela abantu, ngakumbi abantu abaphumeleleyo kuba akafuni kuphulukana nexesha lakhe nabo bamiselwe ukusilela.
Lo mfo uya kwenza yonke into isebenze nokuba ayiyompumelelo engenakwenzeka, okanye ukuba ngumsebenzi onzima wokuzithandela, lo uya kuhlala efumana isisombululo sokulungisa iingxaki, kuba unamandla okutsala impumelelo ebomini bakhe nokuba yeyiphi na imisebenzi uyakhetha.
Umthandi onengqondo enengqondo
Nokuba ungacinga ukuba uvakalelo lweNyanga kunye nokuqiqa kweCapricorn kungangabonakali kufanelekile, baya kuyifumana indlela yabo kolu manyano.
Unenkqubo yexabiso lakhe buqu, esebenza kuzo zonke iinkalo zobomi bakhe, kwaye iya kufuna nokuqinisekisa ukuba lo mqondiso uyakuxabisa ngaphezu kwayo yonke into enolwalamano, kuba ngapha koko, ukuba asinabo abo sibathandayo Siyavuya kwaye siyazingca ngempumelelo yethu, asinanto.
Ngexesha elithile ebomini, unokufumanisa ukuba akonwabanga, yiyo ke loo nto kufuneka akhangele isiqalo esitsha ukuze ekugqibeleni afumane ulwaneliseko aludinga kakhulu.
Ukuba asinalo mphefumlo usilindileyo emnyango wangaphambili ngoncumo ebusweni balo, asinanto.
Kungenxa yokuba lo unengqondo enengqiqo, ngamanye amaxesha unokungaziqondi ukuba zisebenza njani iimvakalelo, yiyo loo nto enokubonakala ikude okanye ingakhathali, kodwa inyani kukuba akakwazi ukuqonda ukuba zisebenza njani izinto, ke ukuba ube neNyanga eCapricorn njengeqabane lobomi, qiniseka ukuba unomonde ngokwaneleyo kuye.
uDisemba 17 uphawu lweenkwenkwezi
Zama ukumqonda, kwaye ube khona xa umfuna, umqinisekise ukuba uthando lwakho lunyulu kwaye lunyanisekile kwaye uyamthanda ngale ndlela ayiyo.
Mnike nje isibindi esincinci sokukholelwa kuye nakwizinto oza kukhula uzenza kunye kwikamva.
Njengeqabane, udlala indima enkulu ekuncedeni iCapricorn ukuba ifumanise malunga nemicimbi yakhe yeemvakalelo kwaye uzilungise, yiyo loo nto ke ukuba uya kuluzalisekisa olu lindelo, uya kukonwabisa kakhulu.
Ekuqaleni, uya kuba ngononophelo olukhulu xa kusenziwa intshukumo yokuza kuwe, kodwa ukuba unesigulana esincinci, uya kubona indoda egqibeleleyo, enothando enesakhono esininzi.
Ukuba uya kumqinisekisa ukuba uluthando lobomi bakho, awunyanzelekanga ukuba ulinde ngaphambi kokuba ubone umntu onomdla, onothando nothando okwaziyo ukwenza yonke into ukuze wonwabe.
Indibaniselwano yeLanga-yeNyanga: Ukujonga Ubuntu bakho
Iimpawu eziPhakamileyo: Ukutyhila iiNtsingiselo ezifihliweyo emva kweNtshutshiso yakho
Iiplanethi ezindlwini: Zijonga njani Ubuntu bomntu
Inyanga ezindlwini: Kuthetha ntoni ngoBomi boBuntu
Amatye okuzalwa kweZodiac: Isiteshi samandla eLitye lokuzalwa kwakho
Ngomhla kaJanuwari 17 wokuzalwa
I-Sagittarius Sun Scorpio inyanga: Ubuntu obuyimfihlo
indoda taurus kunye namabhinqa namhlanje
Indoda ye-gemini kunye nowasetyhini bathanda ukuhambelana
venus kwindoda e-capricorn inomdla
loluphi uphawu ngoFebruwari 24
Ngaba indoda eyi-sagittarius inokuthembeka
Ngaba indoda ye-aquarius inokunyaniseka